amasu othandwayo kuleli uhlobo RPG likhula ngokushesha, futhi zonke izinkampani owaziwa ozama ukukhulula analog ayo "DotA". Blizzard inkampani akakwazanga ukuhlala kude, futhi esemnika amasu ayo.
Ukukhululwa izinto ezintsha eside elindelwe kwenzeka ngo-2015, okungukuthi ku-2 Juni. Abasebenzisi abaningi be-alindele ukuthi izozama ukukopisha "DotA 2". Nokho, umdlalo sasithi asifane LoL ngisho ngokwengxenye kudlulwe kuyo.
Kuyaphawuleka ukuthi umdlalo kuyatholakala ngokukhululekile, kodwa kubonakala ngemuva kokufakwa ngisho simple. Abaningi izinhlamvu uzovalwa ngoba umdlali, kanye nokufinyelela kungenzeka kuphela lwemali yasendaweni umdlalo. A inqubo efanayo isetshenziswa imidlalo eminingi futhi isivele ababewazi wonke umuntu.
Ungalahli ithemba, iphele ithuba ukudlala nezinye izinhlamvu mahhala. Lwemali onikelwa izimpi kokuqhuba, futhi ekugcineni umdlali ngamunye angase ukuthenga uhlamvu ungathanda iqoqo lakho.
Ngaphezu lwemali, kukhona elinye ithuba ukuzama new heroes. Kasibili njalo ngesonto uhlu izinhlamvu atholakale umdlali zizoshintsha, ukuze umdlalo kudala ezihlukahlukene nezinhlamvu.
Ingqikithi yalo mdlalo
Kuningi kujabule abadlali njalo siguqula izindawo ngoba impi. Futhi lokho hhayi kuphela indawo izinguquko landscape futhi nalo Umgomo umdlalo. Amalungu ayokulwa ukulawula amaphuzu, ukuze abangele izicabucabu ngokwabo e azowalekelela futhi ukukhiqiza pirate yengcebo. impi ngamunye hhayi nje ngekulandzelana kwetintfo letenteka Tactical, kodwa futhi Bhalobhasha othakazelisayo.
Izimpi zenzeke ngokushesha, it ikuvumela ukuba uchithe kusaba kwesigamu sehora kwenye impi. Kunesimo esifanayo iye yasungula ngenxa yokuntuleka izinto ukuze ithengwe. Empeleni, amaqhawe akudingeki ukuchitha isikhathi ngenxa ukuqongelela imali nezinto sonke isikhathi ongase ukwazi ngaso ukuchitha enkundleni yempi.
Ngaphezu Inqubo ethakazelisayo, abadlala bayokwazisa hhayi eliphezulu ikakhulukazi izimfuno Heroes of the Storm. izidingo zohlelo Ubuncane uvumele abanikazi amayunithi buthaka futhi ujabulele Gameplay. Ngeshwa, lokukhulunywa ngako kulendzaba kusho abangekho sebejabulela ihluzo amahle, futhi eziningi imininingwane ezithakazelisayo.
Tidzingo letimbalwa lekumele
Izidingo zesistimu Heroes of the Storm efanelekayo amadivaysi eziningi ephansi amandla. Umdlalo isebenza kuzo ezivamile izinhlelo Windows kakhulu futhi Mac. Kusukela Windows ukuqala umdlalo kuyoba lwesikhombisa elilungile kanye version yesishiyagalombili, kodwa XP kuyinto ngempela evamile ukuba lapho zibhekene nomsebenzi.
Kudingekile ezimbili gigabytes RAM ethulwa njengoba izidingo kakhulu uhlelo ezincane. Heroes of the Storm kukhona ngokugcwele abakwazi ukusebenza, futhi omunye igigabhaythi, kodwa le ndlela kuzoba nokujwayela abuhlungu umdlalo.
Lo mdlalo kuzothatha cishe emihlanu kuya kweyishumi gig memory kudiski ngaphambi kwakho ufake kufanele bacabangele nezidingo zesistimu. Kwezihlabani Yenkinga, Hots uma emifushane, futhi kungase kudingeke more isikhala mahhala, kuye ngokuthi isibalo izibuyekezo.
Processor adingekayo imidlalo kufanele kube kusuka 2.5 kuya 3.0 gigahertz. Nge GHz 2.4 noma ngaphansi nokuhlale unyathela amabhuleki, zenzeka izinkinga umdlalo.
Ukuze elikhulu Izidingo yokusebenza yesistimu Heroes of the Storm badinga ikhono ihluzo ikhadi of 512 MB. Ngaphezu ikhadi ihluzo, kubalulekile ukufaka DirectX okungenani version 9.0.
Ukuze usebenze ngokugcwele, kubalulekile ukuba ube yilungu izidingo ezifanele ohlelweni. Heroes of the Storm akadingi ongakhetha eziphambili kakhulu, kodwa futhi anamandla.
kubalulekile ukuba ikhadi isiqophi ngoba izilungiselelo ukusebenza ihluzo ngoba igigabhaythi noma ezimbili, usebenzisa Radeon.
Processor kufanele ibe mayelana 3.4 noma 3.8 GHz. Kulokhu, umdlali uzothola engcono ukusebenza imiphumela.
Okuhle kunakho konke ukuthi Izidingo zesistimu Heroes of the Storm ezisetshenziswa ku-Windows 7 noma 8. Kuyinto uyelulekwa ukufaka DirectX, kokuba 10 noma 11. imingcele Kunconywe RAM iqala ngo 2 gigabytes.
Kuba nemiphumela emihle kakhulu bungatholakala kumadivayisi ukuthi ezidlula izimfuneko ohlelweni Heroes of the Storm.
Ukuze operation esitebeleni kubaluleke kakhulu ukuba nemingcele elihambisana noma idlula nezidingo umdlalo. Kuphela amadivayisi ezifanele umdlalo kuyokwembula zonke izinto zawo ezingcono umsebenzisi. Nakuba izidingo kakhulu sakugcina abasakwazi okusezingeni eliphezulu, lo mdlalo uyavuza. linanincane lemacophelo angeke ukwazi ukudlulisela ubuhle ihluzo futhi ahlinzeke izinga efanele play.
Kusho ukuthini Ofc ngesiNgisi, nezwi
Ububi Obungaphakathi amabhuleki. Ububi Obungaphakathi kungaqali, the amnyama
"Stalker: Golden isitimela 2": ukudlula ezibudisi umdlalo
Amakhodi kwi "Mafia 2" futhi ikhono lazo
Sifunda indlela ukudoba in the "Maynkraft"
Iholide esiqhingini Madeira: Izibuyekezo
Nokomisa udonga: umane futhi ergonomically
Dill Vodicka: ukubuyekezwa odokotela
Ngesakhiwo Ngilusizo ukukhangisa Proklova
Okubhalisele "Big eMoscow": izindleko Ukusabalala, ibalazwe futhi travel